Abaduni bantshinge ingane emgwaqeni | isiZulu
Abaduni bantshinge ingane emgwaqeni
Ukhala uyazithulisa oshayise wabulala usana
Lugcine lusitholile isitifiketi usana
Isihluku usana luwa luzalwa lwashona
Durban – Abaduni bemoto balaxaze ingane ebisesihlalweni sayo esifakwa emotweni maphakathi nogwaqo, bashaya bachitha nemoto kamama wengane.
Ngenhlanhla kukhona osibonile isihlalo sengane sisemgwaqeni wathola ingane ingenamyocu, kubike iThe Mercury.
Umama ubemise imoto yakhe yohlobo lweBMW ngaphandle kwenxanxathela yezitolo eThekwini kanti kuthe lapho esezothatha ingane yakhe esihlalweni esingemuva kwaqhamuka abaduni bathatha imoto babaleka nayo, ingane iphakathi.
Umshayeli u-Erik Bredberg uxoxe ngokwenzekile ngesikhathi ethwele abasebenzi ebona isihlalo semoto esihlala ingane siphakathi nomgwaqo.
“Siqale sacabanga ukuthi kungenzeka ukuba yisihlalo esidala esilahlwe ngumuntu kodwa sibesesibona ukuthi sibukeka sisisha ukuthi singalahlwa. Ngesikhathi sifika eduze kwaso, bekunengane phakathi ilele,” kusho uBredberg.
Ingane ibibonakala sengathi ingaphansi konyaka ubudala, iyiswe esiteshini samaphoyisa esiseMayville okuyilapho amaphoyisa ebevele esezwile ngesehlakalo sokudunwa kwemoto kunengane phakathi, basebethinta umndeni.
“Umndeni ufikile uzolanda ingane yawo, wonke umuntu ubejabule.”
Imoto itholakale ngokuhamba kwesikhathi ishiywe eCato Manor.